Traduzioni di ljudstva da SerboaBirmano - MyMemory
Hai cercato la traduzione di ljudstva da SerboaBirmano
A isceljeni ne znae ko je; jer se Isus ukloni, jer ljudstva mnogo bee na mestu.
ထိုသူကား၊ အဘယ်သူဖြစ်သည်ကို ရောဂါကင်းသောသူသည်မသိ။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုအရပ်၌ လူစု ဝေးလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍၊ ယေရှုသည် မထင်မရှား ထွက်ကြွတော်မူ၏။
Vika stoji ljudstva na gorama kao da je velik narod, vika i vreva carstva skupljenih naroda; Gospod nad vojskama pregleda vojsku ubojitu.
ကြီးစွာသော အလုံးအရင်း၏ အသံကဲ့သို့ တောင်တို့အပေါ်မှာ လူများ၏ အသံဗလံ၊ စုဝေးသော တိုင်းသူပြည်သားများတို့၏ အုတ်အုတ်ကျက်ကျက်သော အသံဗလံရှိသည်နှင့်၊ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရ ဘုရားသည် စစ်တိုက်ခြင်းငှါ၊ အလုံးအရင်းကိုစီရင် ခင်းကျင်းတော်မူ၏။
ထိုအခြင်းအရာကို ငါအောက်မေ့၍နေစဉ်တွင်၊ ငါ့စိတ်နှလုံးသည် ကြေကွဲလျက်ရှိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည်လူစုများနှင့် ပေါင်းဘော်လျက်၊ ရွှင်လန်းခြင်း အသံ၊ ထောမနာပြုခြင်းအသံတို့ကို ပြိုင်ဆို၍၊ ဓမ္မပွဲခံ သောလူစုများနှင့်အတူ ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်သို့ ဖြည်းညှင်းစွာ သွားလှလေပြီ။
သူ၏ ကိုယ်သည် ကျောက်မျက်ရွဲကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ သူ့မျက်နှာသည်လည်း လျှပ်စစ်ကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ သူ့မျက်နှာ သည်လည်း လျှပ်စစ်ကဲ့သို့ ထင်၏။ သူ့မျက်စိသည်လည်း မီးခွက်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ သူ့လက်ခြေတို့သည် ဦးသစ်သော ကြေးဝါအရောင်အဆင်းရှိ၏။ သူ့စကားသံသည် များစွာ သော လူစုအသံနှင့်တူ၏။
Doista æu te sabrati svog, Jakove, doista æu skupiti ostatak Izrailjev; postaviæu ih zajedno kao ovce vosorske, kao stado usred tora njihovog, biæe vreva od ljudstva.
အိုယာကုပ်၊ ငါသည် သင်၏အမျိုးသားအပေါင်း တို့ကို၎င်း၊ ကျန်ကြွင်းသော ဣသရေလအမျိုးသား အပေါင်းတို့ကို၎င်း ဆက်ဆက်စုဝေးစေမည်။ သိုးခြံ၌ သိုး များကဲ့သို့၎င်း၊ ကျက်စားရာအရပ်ထဲမှာ သိုးစုကဲ့သို့၎င်း သူတို့ကို ငါစု၍ ထားမည်။ လူများသောကြောင့် အသံကြီး လိမ့်မည်။
period (Esperanto>Francese)siobe (Cinese semplificato>Inglese)bush baby (Inglese>Swahili)ang magkakaibigan walang iwanan (Tagalog>Inglese)ndu ka (Hindi (indiano)>Inglese)el tuvo tres hijos con karen martinez (Spagnolo>Inglese)bf के पूरी फिल्म (Hindi (indiano)>Nepalese)information about potter (Telugu>Inglese)torilor (Romeno>Italiano)don’t give advantages to someone who likes you (Inglese>Tagalog)braquiuro (Spagnolo>Norvegese)besan flour (Inglese>Telugu)bortrykkes (Danese>Xhosa)salara (Polacco>Italiano)librum (Latino>Inglese)yes i can speak welsh (Inglese>Gallese)lesion (Danese>Spagnolo)läähättämästä (Finlandese>Francese)flech (Francese>Inglese)tukar jawi ke rumi (Malese>Arabo)bicol translation wag maingay (Inglese>Tagalog)osaline (Estone>Vietnamita)i feel empty inside (Inglese>Spagnolo)maksud untidy (Inglese>Malese)avis d'utilisation (Francese>Inglese)